title_temp Mụta | drdmserver1.com
2020欧冠比赛时间Peeji emelitere emelitere ikpeazụ: Jun 25, 2020
Mụta maka Ethereum
Nnọọ na drdmserver1.com/ig/learn, otu ihe eji aru oru nyere gị aka ịmatakwu gbasara Ethereum. Peeji a gụnyere teknuzu na akụkọ na-abụghị ọrụaka, ntuziaka na ihe eji aru oru. Ọ bụrụ na ị bu onye ohuru na Ethereum, anyị na-atụ aro ka ịmalite ebe a .
2020欧冠比赛时间Ndị a bụ ụfọdụ ebe mmalite kachasi mma:
Na mgbakwunye na ozi dị na peeji a, enwere ọtụtụ ihe enyere obodo aka kwesịrị ịchoputa:
Ihe omuma zuru oke dabere maka ihe niile Ethereum
Ihe eji eme nkuzi banyere Ethereum ezubere maka ndị na ebido ebido
Obodo wiki wuru banyere teknụzụ Ethereum
Ederede nka na ụzụ na nkuzi maka Ethereum na arụmaoru metụtara ya
Vidio na okwu banyere Ethereum
Akwụkwọ akụkọ uwa izu nke na-ekpuchi mmepe di mkpa gafere ihe di ndu n' ebe obibi
Kedu ihe dị ọhụrụ na ETH 2.0 Akwụkwọ akụkọ uwa mgbe niile gbasara mmepe ETH 2.0
Usoro Ethereum hackathon -gaa otu nke dị gị nso!
Ethereum kachasi mkpa
2020欧冠比赛时间Ọhụrụ na Ethereum? Edemede ndị a na ihe eji aru oru bụ ebe dị mma ịmalite.
emelitere ohuru ọtụtụ mgbe - EthHub
Otu Ethereum si arụ ọrụ
2020欧冠比赛时间Ogo elu nkọwa nke Ethereum na teknụzụ blockchain nile.
2020欧冠比赛时间Nkwekọrịta amamihe 'bụ naanị mpempe koodu na-aru oru na Ethereum. A na-akpọ ya "nkwekọrịta" n'ihi na koodu na-aru oru na Ethereum nwere ike ichikwa ihe ndị bara uru dị ka ETH ma ọ bụ akụnuba dijitalụ ndị ọzọ.
I chọrọ ịmụta ka esi eme nhazi nkwekorita amamihe na Ethereum? drdmserver1.com/ig/developers/
Ihe akaebe nke Oru na Ngwuputa
Ethereum ugbu a na-eji usoro akpọrọ “Ihe akaebe nke Oru”. Nke a na-enye ohere ka netwọk Ethereum kwenye na steeti ozi niile edekọtara na blockchain Ethereum, ma gbochie ụdị mwakpo akụ na ụba.
Coindesk Na ETH 2.0, Ethereum ga aga na sistemụ dị iche akpọrọ “Ihe akaebe nke Ntinye ego”. Gụkwuo banyere ETH 2.0 n'okpuru.
Ndị ahịa na Ebe nzuko
Ngwakọta Ethereum nwere ọtụtụ ebe nzuko, nke ọ bụla na-aru oru sọftụwia ndị ahịa jikotara onu. Enwere ndị ahịa abụọ ana-eji site na ọtụtụ ebe nzuko:Geth(edere na ebe ana aga) na (e dere na Rust).
I chọrọ ịmụ otu esi agba nodu nke gi? drdmserver1.com/ig/developers
Imeziwanye Ibelata Ethereum
E nwere ọtụtụ mbọ a na agba iji mee Ethereum ka ọ bụrụ “ihe egwu” site na ịbawanye ọsọ na ihe mmeputa azụmahịa ya n'ozuzu. Na-ahazịzie, ana-edozi ha n'ngwọta “etu otu” na “etu abuo”. “Etu otu” na-ezo aka na isi imeziwanye Ethereum protocol. Ọrụ bụ isi iji meziwanye usoro isi Ethereum bụ ETH 2.0. “Etu“ abuo ”na-ezo aka na teknụzụ nke etinyere“ n’elu ”nke usoro Ethereum dị ala, na-enye aka nnukwu scalability n’emebighị ihe na nchekwa. Enwekwara teknụzụ “nke na-abụghị nke ọma” dị ka eriri n'akuku, nke na-eme ka ọ dịkwuo ukwuu ma ọ bụrụ na -eme usoro azụmahịa nche dị iche.
Ugwo & Ọwa steeti
Nov 6, 2015 -Jeff Coleman
Emelitere ọtụtụ mgbe - EthHub
eb 8, 2018 - Georgios Konstantopoulos
ETH 2.0 (nke a makwaara dị ka “Serenity”) na-ezo aka na nkwalite isi ọzọ nke usoro isi protocol Ethereum. Ọ jikọtara ọtụtụ ndozi na usoro isi Ethereum, ma ọ bụ “Etu otu”.
Emelitere otutu mgbe - EthHub
ETH 1.x bụ aha maka nchịkọta nke nkwalite ndị ọzọ na usoro Ethereum dị adị. Ebumnuche bụ ịga n'ihu na-emeziwanye ma na-elekọta Ethereum ebe a na-azụlite ma na-eme ETH 2.0. Maka ozi ndi ozo, lee
2020欧冠比赛时间“Cryptoeconomics” bụ sayensị bara uru nke ijikọ sistemu e kesaa ekesaa, ebe a na-echekwa akụrụngwa nke sistemụ ahụ site na mkpali akụ na ụba, na ebe a na-ejikwa usoro akụ na ụba na-enyocha usoro akụ na ụba. Ọ bụ okwu izugbe maka omume nke ịkpụpụta na scaling blockchains dịka Ethereum na Bitcoin.
Nkatọ na obi abụọ
Echiche nkatọ nke Ethereum na Cryptocurrencies.
March 27, 2019 -Ajụjụ ọnụ Rick Dudley
(Video) Machị 10, 2019 - Rick Dudley